Ny tanànan'ny New York dia mitaky porofo fanaovam-baksiny COVID ho an'ny fisakafoanana ato an-trano, gym sy teatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Fanavaozana ny tanjon'ny dia » Ny tanànan'ny New York dia mitaky porofo fanaovam-baksiny COVID ho an'ny fisakafoanana ato an-trano, gym sy teatra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fepetra vaovao dia hofoanana hatramin'ny volana aogositra sy septambra ary hitaky ny mpiaro hiditra amin'ny orinasa sasany mba hanana fatra iray vaksinin'ny Covid-19 farafaharatsiny.
New York City dia iray amin'ireo tahan'ny vaksiny avo indrindra ao amin'ny firenena.
Manodidina ny 66% ny olon-dehibe ao New York no efa vita vaksiny.
Ny fanjakan'ny New York dia iray amin'ireo voadona mafy indrindra tamin'ny COVID-19.
Paikady vaovao mahery setra hanaovana vaksinin'ny olona manohitra ny COVID-19 no nambaran'i New York City Ben'ny tanàna Bill de Blasio androany.
Ny ben'ny tanàna NYC dia nanamafy fa ny hetsika toy ny fisakafoanana anaty trano sy ny fanatrehana gym dia tsy ho ela ho an'ny olona vaksinin'ny coronavirus.
"Ny fomba tokana hananganana ireo tranobe ireo ao an-trano dia raha vaksinina ianao", hoy ny nambaran'ny ben'ny tanàna tamin'ny talata teo, momba ny ahiahy momba ny karazana Delta miely haingana.
Ny fepetra vaovao dia hofoanana hatramin'ny volana aogositra sy septambra ary hitaky ny mpiaro hiditra amin'ny orinasa sasany mba hanana fatra iray vaksinin'ny Covid-19 farafaharatsiny. Izany dia azo porofoina amin'ny alàlan'ny karatra fanaovana vaksiny na fampiharana fanaovana vaksiny.
De Blasio dia tsy niresaka an-tsipiriany momba ny fomba hampiharana ilay mandat. Nilaza izy fa manan-kery amin'ny 16 Aogositra ny lalàna, saingy tsy hatao hatramin'ny 13 septambra ny fizahana.
Nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna teo aloha fa ny mpiasan'ny tanàna rehetra dia tsy maintsy hatolotra vaksiny amin'ny volana septambra, na tsy maintsy iharan'ny fitsapana isan-kerinandro izy ireo.
Manodidina ny 66% ny olon-dehibe ao New York no efa vita vaksiny - iray amin'ny taha ambony indrindra eto amin'ny firenena - saingy ny fanjakana no iray tamin'ireo voa mafy indrindra tamin'ny COVID-19.